Indlu yasedolobheni esesitayeleni yase-Scandinavia enokubukwa okumangazayo - I-Airbnb
Indlu yasedolobheni esesitayeleni yase-Scandinavia enokubukwa okumangazayo
Mount Beauty, Victoria, i-Australia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Beatrice
Ibheke i-Mount Beauty isuka endaweni yayo ephakeme, le ndlu yedolobha yesimanjemanje, eklanywe ngendlela yokwakha yaseScandinavia inikeza isisekelo esiphelele sohambo lwakho lwe-alpine. Gxila emibonweni nasekuthuleni okuvela endaweni yokuhlala, umpheme noma i-spa!
Le ndlu yedolobha ezimele inikeze ukubukwa okumangazayo, amagumbi okulala enkosi amabili (imibhede nayo iguqulwa ibe yimibhede emine eyodwa), igumbi lokugezela elisanda kulungiswa elinamathawula ashisayo, indawo yokuwasha neyokomisa (yabashushuluza eqhweni), kanye nekhishi/indawo yokuhlala evulekile nesimanjemanje. indawo. Hamba uphume endaweni yokuhlala ungene emphemeni wangaphandle onetafula nezihlalo, kanye ne-spa yabantu ababili ozoyithokozela ngemuva kosuku lokushushuluza, ukugibela ibhayisikili noma ukuhamba ehlathini. Kuneshede ekhiyekayo yokugcina (enezinyusi zamabhayisikili) ezingeni eliphansi lama-skis namabhayisikili. Izivakashi nazo zamukelekile ukugcina (ahlanzekile) amabhayisikili ngaphakathi. Kukhona indawo yokupaka izimoto ezimbili.
Leli fulethi lihlanganisa ukufudumeza okubuyela emuva/i-air conditioning kuwo wonke amagumbi, umlilo welogi yegesi, i-Smart TV ne-DVD engu-40-intshi enomsindo ozungezile, isipikha seBluetooth, i-microwave, i-oven, umshini wokuwasha izitsha nazo zonke izidingo zasekhishini. Kukhona ne-TV ekamelweni elilodwa kanye nezingubo ezakhelwe ngaphakathi kuwo womabili amakamelo okulala. Zonke izinto zikagesi zisezingeni eliphezulu.
4.93 · 251 okushiwo abanye
Hlola ezinye izinketho ezise- Mount Beauty namaphethelo